श्रम स्वीकृति सकियो ? अझै पनि विदेशमै हुनुहुन्छ ? - deshparadesh |सीप, समृद्धि र सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीका लागि
श्रम स्वीकृति सकियो ? अझै पनि विदेशमै हुनुहुन्छ ?
नवलपरासीका खुईत प्रसाद महतोले लामो समय साउदी अरवमा विताए । दुई बर्षे जागिरे अवधि सिध्याउँदै नेपाल आएर फर्किने गरेको पनि तीन पटक भइसकेको थियो । चौथोपटक गएको २७ महिना भएको थियो । अब अर्को महिना घर फर्किन्छु भनेर घरमा खवर गरेका उनी अकस्मात छाती दुख्यो भन्दै साथीको काखमा ढले र कहिल्यै नउठ्ने गरि बिदा भए ।
घटना भएको दुई बर्ष भयो । श्रीमानको मृत्यु भएपछि श्रीमती लालकुमारीलाई छोराछोरी पढाउन र घर खर्च चलाउन धौ धौ परेको छ । श्रम अवधी भन्दा ३ महिना बढि बसेकाले उनका परिवारले कुनै सहयोग पाएन । शव ३ महिनामा घर त आइपुग्यो तर न त प्रवद्र्धन वोर्डबाट परिवारले कुनै आर्थिक सहयोग पायो न त बिमा कम्पनीबाट नै केहि पाए । साउदीस्थीत कम्पनीबाट पनि खुईतका परिवारले कुनै सहायता पाएनन् ।
छोरा एसएलसी पास भए । तर बाबुको मृत्यु पछि कमाउने कोहि नभएकाले उनले पढाई छोडे । छोरी पढ्न चाहन्छिन् । तर उसलाई कसरी पढाउने भन्ने चिन्ता छ आमा लालकुमारीलाई । छोरीको पढाई खर्चका लागि सहयोग माग्न बिभिन्न ठाउँमा धाएकी लालकुमारीले भनिन विदेशको ठाउँबाट भन्ने वित्तिकै नेपाल आउन कम्पनीले दिएन, मृत्यु भएपछि हामीलाई सरकारले हेरेन, हामी अन्यायमा पर्यौं ।
ईन्दु मगरको समस्या पनि यस्तै छ । उनका श्रीमान खेम बहादुर मगर रोजगारीका लागि मलेसिया गएका थिए । करार अवधि सकिएको ५ महिनापछि उनको मृत्यु भयो । श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएको भन्दै राहत केहि पाएन परिवारले । पढ्ने उमेरका २ सन्तान छन् । बिदेशमा श्रीमान्को मृत्यु भएपछि ईन्दुले ज्याला मजदुरी गरेर उनीहरुलाई पढाईरहेकी छन् । दैनिक ज्याला मजदुरीले चलेको परिवारलाई खानलाउन नै धौ धौ परिरहेको अवस्थामा उनीहरुलाई कहिलेसम्म पढाउन सकिन्छ भन्ने यकिन छैन आमा ईन्दुलाई ।
श्यान बहादुर रानाको परिवारको कथा पनि यी भन्दा फरक छैन । रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका श्यानबहादुरले भने अनुसारको काम तलव पाएनन् । उनी घर फर्किन चाहन्थे तर कम्पनीले रोजगार करार सम्झौता नसिकएसम्म फर्किन दिएन । करार अवधि सकेर घर फर्किन तयार थिए उनी । तर फर्किने चाँजोपाँजो मिलाउँदै गरेको अवस्थामा करार अवधी सकिएको ४० दिन पछि मलेसियामा नै उनको मृत्यु भयो ।
घरमा तीनजना छोराछोरी पढ्ने उमेरका छन् । तर उनका छोराछोरी पनि नेपाल सरकारको छात्रबृत्तिबाट बञ्चित भए । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उनका छोराछोरीको शिक्षा धरापमा छ ।
यी केहि यस्ता उदाहरणहरु हुन् जसमा परिवारले दोहोरो समस्या झेलिरहेको छ । एकातिर कमाउने उमेरको परिवारको एउटा अभिभावक गुमाउनु परेको छ भनें अर्कातर्फ आर्थिक सहायताबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ । यसले ति परिवारका बालबालिकालाई पढाई सुचारु गर्नसमेत मुस्किल परिरहेको छ ।
सरकारले हाल वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका र पुर्ण अंगभंग भएका कामदारका छोराछोरीलाई छात्रबृत्ति दिईरहेको छ । अझ एसईई उत्तिर्ण गरिसकेकाहरुका लागि प्राविधिक शिक्षाको लागि पनि छात्रबृत्ति उपलब्ध गराई रहेको छ । तर खुईत प्रसाद, खेम बहादुर, श्यान बाहादुर जस्ता कामदारका परिवार यो सुविधाबाट वञ्चित छन् । कोहि त रहरले पनि श्रम अवधिभन्दा बढी समय बसेका हुनसक्छन् तर बहुसंख्यक भनें विदेशमा बाध्यताले नै करार अवधिभन्दा बढीसमय बस्न बाध्य छन् । तर यसको मूल्य पनि स्वयं तिनै कामदारको परिवारले चुकाउनु परिरहेको छ ।
परिवारको एउटा अभिभावक गुम्नु भनेको ठूलो क्षति हो । तर बैदेशिक रोजगारका क्रममा कसैको श्रम स्वीकृतिको अवधिमा नै मृत्यु भएमा तिनका परिवारले केहि आर्थिक सहायता पाउँछन् जसले परिवारलाई बाँकी जीवनयापनमा केहि हदसम्म मद्धत गर्दछ । तर जसको मृत्यु हुँदा श्रम स्वीकृतिको अवधि कटिसकेको हुन्छ, उसका परिवारले न त आर्थिक सहायता पाउँछ न त पढ्ने सुविधा नै ।
त्यसरी मृत्यु भएका व्यक्तिहरु पनि श्रम स्वीकृति लिएर, कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेर नै बैदेशिक रोजगारमा गएका हुन् । यदि राज्यले प्राप्त हुने सेवा सुविधावाट उनीहरुलाई वञ्चित गर्ने हो भनें सरकारले अझ धेरै सुचना तथा जानकारीहरु फैलाउन जरुरी छ । यसमा स्थानीय निकाय तथा अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरु बीच हातेमालो गर्दै धेरै भन्दा धेरै परिवारसम्म पुग्न जरुरी छ ता कि खुईत प्रसाद, खेम बहादुर, श्यान बहादुरको परिवारले जस्तै अरु परिवार समस्यामा नपरुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् 'विदेशमा तँ कोसँग बसिस् ?'